AMISOM oo tabababar Muqdisho ugu furtay Ciidamo ka tirsan dowladda – idalenews.com
AMISOM oo tabababar Muqdisho ugu furtay Ciidamo ka tirsan dowladda
Qeybtii u horeysay ciidamo ka tirsan dowladda ayaa tababar loogu furay mid ka mid ah xeryaha ciidan ee ay gacanta ku hayaan AMISOM, iyadoo tababarkan uu bilow u yahay tababaro ciidamada dowladda lagu siinayo gudaha dalka.
Ciidamadan oo gaaraya boqolaal ayaa qeybtooda u horeysay tabababar uga socdaa Jazeera, halkaasoo xero ciidan ay ku leeyihiin AMISOM, waxaana askarta la baranayaa xeelado iyo qidad xaga dagaalka.
Inkastoo horay ciidamada dowladda tababar loogu qaadi jiray dalalka deriska, ayaa horay dowladda Soomaaliya shaaca uga qaaday in ciidamada wixii hada ka dambeeya gudaha dalka lagu tababari doono.
Askartan tababarka ka qeyb qaadaneysa ayaa waxaa qeyb ka ah koox ciidan oo ka tirsan AMISOM, kuwaasoo la barayo habka shiishka, waxaana kooxdan la sheegay inay si gaar ah u tababaran yihiin, gaar ahaan la siinayo tababarka dhanka shiishka ee Snipers-ka.
Midowga Yurub ayaa ciidamada dowladda horay ugu tababaray dalka Uganda, halkaasoo xerada Bihanka ay ka soo baxeen kumanaan askari oo labadii sano ee u dambeysay Uganda lagu soo tababaray, iyadoo qeybtii u dambeysay dhowaan loo soo xiray.
Idale New Muqdisho
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole oo lagu wado inuu booqdo magaalada Kismaayo
Askar ka tirsan ciidamada Booliska Kenya oo goor dhow lagu toogtay Gaarisa